Iindaba - Meokon 1 umzuzu "Phonononga": Umsebenzi wokuhambisa iBluetooth wesango elingenazingcingo
Ngophuhliso lwe-Intanethi lwezinto kunye netekhnoloji yedatha enkulu, kunye nokuphunyezwa okukhawulezileyo kwamakhaya akrelekrele kunye nezixeko ezi-smart, uphando lwetekhnoloji kunye nophuhliso kunye nokwenza imveliso kwimizi engenazingcingo nayo iyaqhubeka ukuqhubela phambili. Kule meko, nje ukuba isango elingenazingcingo zeBluetooth liphume, lafumana ingqalelo ebanzi kolu shishino.
Isango lisebenzisa ugqithiso lweBluetooth olungenacingo, oluqhutywa ngokubanzi kusetyenziswa i-RT-Thread (inkqubo ye-real-time yokusebenza enemisonto emininzi), enezinto ezibonakalayo eziluncedo, kubandakanya izinto ezininzi ezinjengeendlela zonxibelelwano ezahlukeneyo, iitheminali zokufikelela, kunye noxinzelelo kunye nobushushu ukufumana.
Emva kokuba isango le-smart smart lixhumeke kwinethiwekhi yendawo enye, inokungena kwiphepha lewebhu kwisango leBluetooth ngekhompyuter yokulawula iisenzi. Unokongeza / ucime umthumeli obophelelweyo weBluetooth kwaye uqwalasele iiparameter zesenzi. Ukongeza, indlela yokufaka kolu ngcelele lweendlela ezingenazingcingo zeBluetooth ilula kwaye ilula, kwaye ixhotyiswe ngeadapter yamandla eyi-220V, ekulungeleyo ukufakelwa kwindawo kunye nokulungiswa kweengxaki ziinjineli.
Isango elingenacingo leBluetooth linezi zinto zilandelayo:
1. Uyilo luqhubele phambili, zombini uyilo lobuchwephesha kunye noyilo lokubonakala luhambelana ngakumbi neemfuno zokwenyani zesimo sesicelo, ivolumu incinci kakhulu, inqanaba lokudibanisa liphezulu, kwaye ukusetyenziswa kuyandiswa kakhulu.
2. Isango leBluetooth linokuxhasa iindlela zonxibelelwano ezininzi ezinjenge-Ethernet / 4G / RS485 ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo phantsi kweemeko zonxibelelwano ezahlukeneyo;
3. Isango linokuxhasa ukufikelela kwiimvakalelo ezingaphezu kwe-100 zeBluetooth ezinemilinganiselo engaphezulu kwe-100, kwaye ixhasa ulawulo lwesango kunye noqwalaselo lweparameters parameter, ezibonisa ngokunzulu izibonelelo zemveliso ebalulekileyo "kuthumelo lweBluetooth olungenacingo";
4. Inokudityaniswa kwiindidi ezahlukeneyo zeesenzi ezinje ngoxinzelelo, ubushushu, inqanaba lolwelo, ubushushu kunye nokufuma, kwaye inokusetyenziswa kwiimeko ezahlukeneyo.
Ngenkxaso yezinto ezininzi kunye neempawu, isango elingenacingo leBluetooth linoluhlu olubanzi lwezicelo kwaye linokusetyenziswa kwizimo zesicelo ezinje ngamagumbi empompo yomlilo, iifektri ezifanelekileyo, iilebhu kunye namagumbi ekhompyuter. Kuyabonakala ukuba intengiso yexa elizayo yesango icacile, kwaye ubungakanani besicelo bunokwandiswa.